Ra'yiga:Hambalyada DoorkMuwaadinka - Cakaara News
Ra'yiga(CakaaraRa'yiga) waxaa Dhambaal noga soo diray Qurbaha mid ka mida Qurbajoogta ka soo jeeda DDSI ee Dalka Dibadiisa ku Nool Laguna Magacaabo Axmed Xaaji isagoo Shucuurtiisa cabirayana Ku soo daabacay sidan hoose.
asc marka hore waxaan halka ka salaamayaa bahda saxaafadda cakaara news salaaan ka dib waxaan halkan hambalyo uga dirayaa iyo bogaadin dhamaan ddsi taasoo ku beegan 29 hidhaar maalinta qowmiyadaha iyo shuucuubta etoobiyo.waxaan aad ugu farxay xafladii weyneyd ee lagu qabtey garoonka kubadda cagta ee jigjiga waxay aheyd xaflad qiimo weyn ku fadhida oo lagu farxo.
aniga oo ku nool qurbaha gaar ahaan wadanka norwey waxaan dareemayaa qiiro wadinnimo kolkii aan ka daawadey tv xafldii qowmiyada ethiopia ee lagu qabtey magaalada jigjiga caasimada ddsi. waxaan hakan hambalyo khaas ah uga dirayaa m/weyna dawlada deegaanka mudne cabdi maxamuud cumar.waxaan ddsi u rajeynayaa guul iyo horumar.
hadaba aniga oo ah Axmed xaaji xuseen waxaan ku cabirayaa farxadeyda geeraarkan iyo Maansadan gabay.
daruuurtii inoo curatey baa doogu soo baxaye
dayowgii walaalaha itoobiyo dhan baa isugu isusoo dumaye
dabaaldagii qowmidaha waan ku diirsadayoo meeqaamka buuxiyaye.
daafaha aduunka oo dhan baa laga daawadaye
xeedhyaha diyaafadan karuur dhada Geela lagu daacshey
daba haatan ka horow ma jirin wax u dadaalaaye
ilaahii dib ucurasha keenayow deeqdan adigaa leh
horumarkaaa deegaankeena deg deg loogu sameeyey
dunidoo dhan ogaatey Dagalka Diiradana la wada saarye.
madaxweyne la doortey Daacada oo dadkiisiina daryeeley
dooranow cabdi weeyoo dayax soo baxay weeye